Kacdoonka Ka Dhanka Ah Maamulka Tigreega Oo Sii Xoogeystay. – Bogga Calamada.com
Kacdoonka Ka Dhanka Ah Maamulka Tigreega Oo Sii Xoogeystay.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya waxey sheegayaan inuu sii xoogeystay Kacdoonka ka dhanka ah maamulka Tigreega ee ka soconaya gobalada dalkaasi.
Labadii Maalin ee u dambeysay waxa uu kacdoonka kusii fiday goobo cusub sida magaalada Dire-Dhabe oo ka tirsan gobalka ay Oromadu degto,waxaana halkaasi ka socday Kacdoon iyo Rabshado xoogan oo si weyn u saameeyay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi.
Dhalinyaro aad u careysan ayaa taayeero ku xiray wadooyinka magaalada waxaana gabi ahaan xiran adeegyadii Ganacsiga ee magaalada Dire-Dhabe,iyadoona iska hor’imaad xoogan gudaha magaalada uu ku dhexmarayo Kacdoon wadayaasha iyo ciidamada taabacsan maamulka Tigreega ee xooga ku heysto talada dalkaasi.
Ciidamada dowlada Xabashida Itoobiya ayaa adeegsanayo Rasaas nool nool halka shacabka Oromada ee kacdoonka ka wada magaalada Dire-Dhabe badankoodu ay adeegsanayaan Dhagaxaan oo ay ku tuurayaan ciidamada Tigreega taabacsan.
Inta badan dalka Itoobiya waxaa ka socda Kacdoono ka dhan ah maamulka Tigreega xooga ku heysta Talada dalka Itoobiya Balse dowlada Xabashida Itoobiya ayaa juhdi xoogan ku bixisa in aan la ogaan xogta Kacdoonada iyada ka dhanka ah ee ka socda gudaha dalkaasi.